एप्पल र डीजेआई DJI Mavick प्रो ड्रोन को एक विशेष संस्करण शुरू म म्याकबाट हुँ
एप्पल र डीजेआई DJI Mavick प्रो ड्रोन को एक विशेष संस्करण शुरू
रुबेन गेलार्डो | | एप्पल
यदि त्यहाँ कुनै कम्पनी छ कि ड्रोन क्षेत्र मा एक बेंचमार्क छ, यो DJI हो। यस कम्पनीले बेच्ने मोडेलहरूसम्म टेक्नोलोजीसँग सम्बन्धित छ। यसको सबैभन्दा लोकप्रिय मोडल मध्ये एक हो DJI Mavick प्रो, एउटा सानो फोल्डेबल ड्रोन जुन कुनै पनि ब्याकप्याकमा फिट हुन्छ र केहि रोचक सुविधाहरू छन्।
अहिलेसम्म यो ड्रोन दुई रंगमा बिक्री गरिएको थियो: कालो र प्लेटिनम। जे होस्, एप्पलसँगको सहकार्यमा, जसको मुख्य रंग सेतो छ, तिनीहरूले लन्च गर्ने निर्णय गरेका छन् DJI Mavick Pro Alpine White। यो मोडेल एप्पल स्टोर र DJI स्टोर मार्फत खरीद गर्न सकिन्छ।
तपाईं यो ड्रोनबाट के आशा गर्न सक्नुहुन्छ? ठिक छ, हामीले पहिले नै उल्लेख गरिसकेका छौं, यो एक मोडेल हो जुन चार हतियारहरू हुन् जुन पूर्ण रूपमा फोल्डेबल हुन्छ र त्यो पर्स वा ब्याकप्याकमा फिट हुन्छ। त्यस्तै, यो एक उपकरण हो जुन तपाईं आईफोन वा आईप्याडसँग ह्यान्डल गर्न सक्नुहुनेछ - १२..12,9 इन्च आईप्याड प्रो सहित - वा बिक्री प्याकेजमा थपिएको रिमोट कन्ट्रोलको माध्यमबाट। र सावधान रहनुहोस्, किनकि यो ड्रोन अधिकतम k किलोमिटरको दूरीमा चलाउन सकिन्छ.
अर्कोतर्फ, यस डीजेआई म्याविक प्रो ब्लानक अल्पिनोको स्वायत्तता एकल चार्जमा २ 27 मिनेट सम्म छ। र, यदि यो पर्याप्त थिएन भने, तपाईं एक प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ speed 65 किमी / घन्टा सम्मको गति। फोटो र भिडियो रेकर्डि take लिनको लागि यसको क्षमताको रूपमा, माभिक प्रोसँग सक्षम क्यामेरा छ 4K रिजोलुसन भिडियोहरू र पूर्ण HD ढिलो गति भिडियोहरू रेकर्ड गर्नुहोस्। क्यामेरासँग सेन्सर छ अधिकतम १२ मेगापिक्सलको रिजोलुसनको साथ।
अन्तमा, भित्र १,२1.249eयुरोमा बिक्री प्याकेज दुई स्मार्ट ब्याट्री समावेश गरिएको छ; एक बोरा बोक्ने, प्रोपेलर को तीन अतिरिक्त जोडी (अल्पाइन सेतो); समर्पित बटनहरूको साथ रिमोट कन्ट्रोल; र एक १GB जीबीको माइक्रोएसडी मेमोरी कार्ड DJI Mavick Pro Alpine व्हाइट क्यामेरा द्वारा कब्जा गरिएको सबै चीज भण्डारण गर्न।
अधिक जानकारी र खरीद: एप्पल
लेखको पूर्ण मार्ग: म म्याकबाट हुँ » एप्पल » एप्पल र डीजेआई DJI Mavick प्रो ड्रोन को एक विशेष संस्करण शुरू
डाउनकास्टका साथ तपाईंको मनपर्ने पोडकास्टहरूको मजा लिनुहोस्
अफवाहहरू एप्पलको लागि कन्फिगरेसन गरिएको ई-मसी कुञ्जीपाटीको बारेमा छन्